Pedometer: GStep Counter And Calories Burned Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » pedometer: GStep ကောင်တာပြီးတော့ကယ်လိုရီကိုမီးရှို့
pedometer: APK ကိုမီးရှို့ကြ၏ GStep ကောင်တာပြီးတော့ကယ်လိုရီ
pedometer: ကိုမီးရှို့အဆင့်ကောင်တာပြီးတော့ကယ်လိုရီ - ဒီ app ကိုသင်တိကျမှုအရှိန်အာရုံခံကိရိယာမှတစ်ဆင့်လမ်းလျှောက်ခြေလှမ်းများကိုတိုင်းတာရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ app ကိုလမ်းလျှောက်အကွာအဝေးကိုတိုင်းတာရန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်အလေးချိန်သူကလူများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည်ခြေလှမ်းများလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ကယ်လိုရီတန်ပြန်တွက်ချက်, လမ်းကြောင်းပြေးအကွာအဝေး
ယင်းအရေအတွက်ခြေလှမ်းများနှင့်ကယ်လိုရီ app ရဲ့အားသာချက်
သုံးစွဲဖို့✔လွယ်ကူ: Start / တန့် / သင်ကြိုက်သလောက်ထုံးစံခြေလှမ်း tracker app ကို reset
✔ 100% privacy ကို: သင်၏အညွှန်းကိန်းနှင့် ပတ်သက်. ပြန်ကြားရေးလုံးဝပုဂ္ဂလိကဖြစ်လိမ့်မည်
✔ App ကိုကောင်းတဲ့, လှပသော interface ကိုအတူခြေလှမ်းများလမ်းလျှောက်ရေတွက်ရန်
✔အဆိုပါလမ်းကြောင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ရွရွပြေး app ကိုဘက်ထရီယိုစီးမှုသို့မဟုတ်အပူဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး
✔လမ်းလျှောက်ခြေလှမ်းများအတွက်အင်္ဂါရပ်များ 100% app ကိုတန်ပြန်သုံးစွဲဖို့အခမဲ့များမှာ
အကောင်းဆုံးကိုယလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုများအတွက်✔နေ့စဉ် update ကို & အစီရင်ခံစာ
ခြေလှမ်းများကိုခြေရာခံသောကြံ့ခိုင်ရေး apps များ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
1 ။ pedometer ခြေလှမ်းကောင်တာနှင့်အကွာအဝေး
+ ခြေရာ calculate ကိုနှင့် accelerometer အာရုံခံခြင်းဖြင့်ခြေလမ်းလျှောက်အကွာအဝေးကိုတိုင်းတာ
+ Start / တန့် / အဆိုပါလမ်းလျှောက်ခြေလှမ်းများအတိုင်းအတာဖြစ်စဉ်ကို reset
2 ။ ကယ်လိုရီ tracker app ကို
ကိုမီးရှို့ကယ်လိုရီတွက်ချက်ဖို့တစ်နေ့တာအတွင်း + ခြေရာကောင်တာ
မိုင်နှင့်ကယ်လိုရီနှင့်အတူ + Walking tracker
3 ။ လမ်းလျှောက်ဘို့ pedometer အကြောင်းကို Daily သတင်းစာအောင်မြင်မှုအစီရင်ခံစာ
+ အခမဲ့အကွာအဝေး tracker တွင်လမ်းလျှောက်အကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဇယားအားဖြင့်အစီရင်ခံစာ, ခြေလှမ်းများတွက်ချက်နှင့်ကယ်လိုရီ
4 ။ အပြေး tracker
+ အဆင့်တန်ပြန်ပြေးသမား tracker တွင်အဆိုပါခြေလှမ်းရေတွက်ခြင်းနှင့်အကွာအဝေးခရီးထွက်မှတ်တမ်းတင်, လမ်းကြောင်းပြေးအကွာအဝေးပါလိမ့်မယ်
+ လမ်းကြောင်းကိုအသံဖမ်း။ သင့်ရဲ့လမ်းကြောင်း Redraw
* အများဆုံးတိကျစွာတိုင်းတာခံရဖို့ညွှန်းကိန်းသည်, သင့်မှန်ကန်သောအလေးချိန်နှင့်အမြင့်ရိုက်ထည့်ပါ
ထရပ်များနှင့်ယနေ့လမ်းလျှောက်, သငျသညျကိုမီးရှို့ခြေလှမ်းများနှင့်ကယ်လိုရီခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့လမ်းလျှောက် apps များထည့်သွင်းပါ။ ဒီနေ့သင်ယူတိုင်းခြေလှမ်းသငျသညျအကောင်းတစ်ဦးလူနေမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖန်တီးကူညီပေးပါမည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအတူတူလမ်းလျှောက်ဖို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမီးရှို့ပစ် app ကိုခြေလှမ်းကောင်တာများနှင့်ကယ်လိုရီမျှဝေပါ။
သငျသညျအကွာအဝေးနှင့်အချိန်ခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့ apps များလမ်းလျှောက်အကြောင်းကိုမဆိုမေးခွန်းများရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ကမှတ်ချက်အပိုင်းအတွက်သိကြကုန်အံ့။ * ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူကိုထောကျပံ့ဖို့ကီလိုမီတာ app ထဲမှာလမ်းလျှောက်အကွာအဝေးတွက်ချက်5ဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်!
- Update ကို UI ကိုနေအိမ်
- Update ကို Timeline ကို
pedometer: GStep ကောင်တာပြီးတော့ကယ်လိုရီကိုမီးရှို့
11.40 ကို MB